Son Hermes màu nào đẹp nhất? Bí quyết chọn son giúp lên màu chuẩn | Muasalebang - Muasalebang
Son Hermes màu nào đẹp nhất? Bí quyết chọn son giúp lên màu chuẩn | Muasalebang
Đang Đọc: Son Hermes màu nào đẹp nhất? Bí quyết chọn son giúp lên màu chuẩn | Muasalebang in Muasalebang
Uma kuziwa kumkhiqizo weHermes, abantu abaningi bazocabanga ngezesekeli ezidumile zemfashini eziphezulu njengezingubo, izicathulo, izikhwama zesikhumba zengwenya, njll. Imikhiqizo ekhiqizwa yilo mkhiqizo yenza abantu abaningi bafune ukudideka. Phakathi kwaleyo mikhiqizo, uHermes usanda kukhipha i-palette entsha ye-lipstick eyenza abesifazane abaningi balangazelele ukuyithenga. Ngakho I-lipstick ye-Hermes Imuphi umbala ogqama kakhulu? Imfihlo yokukhetha i-lipstick ukusiza umbala ezindebeni ezijwayelekile kakhulu? Uma uhlose ukuba ngumnikazi wale lipstick, sicela ubheke isihloko esingezansi.
1 Mayelana noHermes
2 Imikhiqizo emi-5 emihle kakhulu ye-Hermes lipstick namuhla
2.1 Inombolo yombala we-Hermes lipstick 64
2.2 Inombolo yombala we-Hermes lipstick 68
2.3 Umbala we-Hermes lipstick inombolo 85
2.4 Inombolo ye-Hermes lipstick engu-46
2.5 Inombolo yombala we-Hermes lipstick 53
3 Zizwa ngokukhetha i-lipstick ye-Hermes engcono kakhulu kuwe
3.1 Khetha ngokusho kwesikhumba
3.2 Khetha i-lipstick ngobudala
3.3 Khetha i-lipstick ngokusekelwe kubukhulu bezindebe zakho
3.4 Khetha i-lipstick ngokusho kombala wamazinyo
3.5 Khetha i-lipstick esekelwe embala wezinwele
3.6 Zama i-lipstick ngaphambi kokuthenga
3.7 Khetha i-lipstick enkampanini enedumela elihle
3.8 Naka usuku lokuphelelwa yisikhathi
4 Amanothi ambalwa lapho usebenzisa i-Hermes lipstick evamile kahle
5 Isiphetho: Iyiphi iNdodana kaHermes enhle?
Uma kukhulunywa ngomkhiqizo kaHermes, ama-fashionistas wonke ayaqonda futhi azi kahle ngegama elidumile emakethe. Lo mkhiqizo unomlando omude, ngaphezu kweminyaka eyi-183 kuze kube manje. Uma kukhulunywa ngoHermes, abantu bazocabanga ngokushesha ngezikhwama ezibizayo ezinamakhulu ezigidi nezigidigidi zama-dong. Ngenani elinjalo, yilabo kuphela abanemali kanye ne-elite abangaba nemikhiqizo yalolu hlobo olubizayo nolunethezeka. Uma ubambe izinto zikaHermes esandleni sakho, uzonconywa ubuhle nokubaluleka kwalo mkhiqizo wemfashini wezinga eliphezulu.
Uma ezinye izinhlobo zemfashini ezidumile ezifana ne-Chanel, i-Dior, i-YSL, njll ziye zaqala izimonyo ezisezingeni eliphezulu isikhathi eside, uHermes manje usengene emgqeni wezimonyo. Muva nje, lo mkhiqizo usanda kwethula i-lipstick palette ebizwa ngokuthi i-Rouge Hermes. Ngesikhathi le nkampani yethula i-lipstick, yenze amakholwa kanobuhle angakwazi ukuyiziba ngoba ibiphethe isicoco sohlobo oluphambili.
Imikhiqizo emi-5 emihle kakhulu ye-Hermes lipstick namuhla
Kuphalethi ye-Hermes lipstick, kunemibala eminingi ehlukene, ngakho-ke lapho ukhetha, kufanele uthembele ezintweni eziningi ezahlukene. Nansi imibala emi-5 ephezulu I-Hermes lipstick yinhle kakhulu esetshenziswa abantu abaningi.
Inombolo yombala we-Hermes lipstick 64
Uma ujwayele ukusebenzisa uHermes, kufanele ujwayele kakhulu lo mbala. Inombolo ye-Hermes lipstick engu-64 ingumbala abesifazane abangawunaki ngoba umbala obomvu obomvu onokhilimu we-matte uzokusiza ubukeke ukhazimulayo futhi uvelele.
Ubomvu obukhanyayo umbala othopha kakhulu, ngakho-ke le lipstick ithola ukunconywa okuningi. Lena i-matte lipstick, kodwa uma isetshenziswa, ithambile kakhulu, inomuzwa okhanyayo ezindebeni, ayinamathele futhi inombala ojwayelekile kakhulu wokudala ukwelula okucwebezelayo okubushelelezi.
Xem Thêm Review Top 6 viên uống thải độc cơ thể đẹp da được tin dùng nhất 2022 | Muasalebang
Inombolo yombala we-Hermes lipstick 68
Omunye umbala oyintandokazi we-Hermes lipstick line inombolo yombala 68. Lena i-lipstick ebomvu ethandwa amantombazane amaningi namuhla. Lo mugqa we-lipstick unethoni ebomvu ye-matte, uma isetshenziswa ezindebeni zomlomo, izokusiza ukuthi ubukeke ubukhazikhazi, ubumnandi, obuvelele futhi obufanele amathoni amaningi esikhumba. Ungasebenzisa i-lipstick kalula ukuhlanganisa izitayela eziningi ezahlukene kusukela emnene, eyengayo ukuya kokugqamile futhi enamandla.
Lo mkhiqizo une-matte cream lipstick enekhono lokugcina umbala kahle kakhulu, ngisho nalapho udla futhi uphuza, awufihli umbala we-lipstick. Uma i-lipstick isezingeni kakhulu futhi inombala olinganayo, i-lipstick inephunga elithambile, elithambile futhi linokukhanya okucwebezelayo, okuyengayo.
Umbala we-Hermes lipstick inombolo 85
Uma ungumuntu othanda ubuntu obuhehayo, obuyisipoki, nobuvelele, le nombolo ebomvu ye-plum lipstick engu-85 izofaneleka kakhulu. I-Satin lipstick ifaneleka kumantombazane anezindebe ezomile, ngakho-ke uma uyisebenzisa, uzozizwa sengathi usebenzisa i-balm. I-Lipstick ngesimo sekhilimu ye-matte, kuze kufike kumbala ojwayelekile, inokukhanya, iphunga elimnandi.
Ububi bale lipstick ye-satin ukuthi kulula ukuzwa i-streaking, ngakho-ke idinga ukuthi usebenzise izendlalelo eziningi uma uyisebenzisa.
Inombolo ye-Hermes lipstick engu-46
I-Hermes 46 lipstick inombala opinki wamakhorali othandwa ngabesifazane abaningi. Lo mbala we-lipstick ujwayeleke kakhulu kulabo abathanda ukusebenzisa i-lipstick. Uma usebenzisa lo mbala we-lipstick we-46 ezindebeni, kuzomsiza ukuthi ahehe wonke amehlo kumuntu ophambene. I-lipstick inokhilimu we-matte, okunzima ukufiphala lapho udla futhi uphuza, futhi kufika kumbala ojwayelekile uma isetshenziswa.
Inombolo yombala we-Hermes lipstick 53
Kungashiwo ukuthi lona umbala we-lipstick oshisa kakhulu okwamanje othandwa abesifazane. Nge-velvety soft matte lipstick, kunezithako ezinomsoco ngaphakathi, ngakho-ke izindebe azomile futhi zisize izindebe zihlale zimanzi esimweni sokugcwala nokukhanya. Inombolo yombala we-Hermes lipstick engu-53 ibhekwa njengejwayelekile kakhulu futhi ihlala isikhathi eside. Le nombolo ye-lipstick engu-53 inombala ohlukile okhangayo obomvu-owolintshi, ngakho-ke lo mbala we-lipstick ufanelekile kakhulu kumantombazane anesikhumba esihle.
Zizwa ngokukhetha i-lipstick ye-Hermes engcono kakhulu kuwe
Ngaphezu kokukhetha imibala ye-lipstick ngokusho okuthandayo, indlela yokukhetha i-lipstick ukusiza ukuthuthukisa ubuhle bakho obukhangayo, ngokuqinisekile abesifazane abaningi abazi ukuthi kanjani. Uma uzibuza ukuthi ungayikhetha kanjani i-lipstick, sicela ubheke isipiliyoni esingezansi:
Khetha ngokusho kwesikhumba
Uma unesikhumba esilungile, imibala efanele ye-lipstick ongayisebenzisa yilena: Okubomvu, okuwolintshi, okupinki okukhanyayo, ipentshisi, i-beige noma ubunqunu kuzoba yisinqumo esihle kakhulu. Uma unesikhumba esibandayo, izindebe zomlomo ezinsundu ngokukhanyayo nezinqunu zizosiza ukuthuthukisa ubuhle bakho obuhehayo. Ngaphezu kwalokho, uma unesikhumba esifudumele, kufanele ukhethe i-lipstick enqunu noma ekhanyayo epinki.
Xem Thêm Top 3 Kem chống nắng Allie loại nào tốt được ưa chuộng nhất | Muasalebang
Uma uyintombazane enesikhumba esimaphakathi, imibala ensomi ngokukhanyayo, onsomi emnyama kanye ne-pink lipstick izosiza izindebe zakho zikhanye kakhulu. Uma unesikhumba esimnyama, kufanele ukhethe i-lipstick enombala osawolintshi, obomvu-wolintshi noma opinki omnyama ukuze uthuthukise ubuhle bakho obunempilo.
Khetha i-lipstick ngobudala
Ngokusekelwe eminyakeni yobudala futhi kuyindlela yokuba ukhethe umbala we-lipstick ofaneleka kakhulu kuwe. Uma uyintombazane esenkathini yenyanga egcwele, iminyaka engu-20 ubudala, kufanele uzame ama-lipstick anemibala yobusha njengobomvu, obomvana, osawolintshi, njll. Le mibala izoba bukhali ngokwanele ukuze ivumelane nazo zonke izinhlobo zesikhumba nezinwele. kanye nesitayela sobusha. , egcwele ubuntu.
Ungowesifazane oneminyaka engu-30 – 40, ngalesi sikhathi izindebe zakho zizobe zikhanya ngombala, zibe nemibimbi ngenxa yokuguga kwesikhumba. I-lipstick efanelekile kakhulu kule minyaka ukukhetha izindebe zomlomo ezinomsoco owengeziwe ukwenza izindebe zihlale zigcwele. Imibala ebomvu yezitini noma ewolintshi ebomvu ehlanganiswe ne-lip liner iyindlela yokwenza izindebe ziphelele.
Uma uneminyaka yobudala ephakathi, kufanele ukhethe i-lipstick e-orange ebomvu, ebomvu ekhanyayo, ebomvu iplamu, ebomvu, njll. Le mibala izosiza ubuhle bakho bube mnene futhi bube nosawoti. Futhi, gwema ukukhetha imibala egqame kakhulu.
Khetha i-lipstick ngokusekelwe kubukhulu bezindebe zakho
Ukuqina okuncane kwezindebe nakho kuthinta kakhulu ukukhethwa kwe-lipstick ngobuhle. Ngokuqondile:
Izindebe ezincanyana: Amantombazane anezindebe ezincane kufanele akhethe imibala egqamile ye-lipstick efana ne-peach pink, pink pink, pink ephaphathekile, … ngoba le mibala izokwenza izindebe zakho zibe mkhulu futhi zibe zinhle kakhulu. Kuyadingeka ukugwema imibala emnyama ye-lipstick efana: obomvu obumnyama, onsomi, onsundu ocwebezelayo, …
Izindebe eziminyene: Labo abangabanikazi balezi zindebe kufanele bakhethe izindebe ezibomvu ezijulile, ezibomvu ngokukhanyayo, ezibomvu, njll. Le mibala izosiza ukwandisa ubuhle babo be-sexy. Ngaphandle kwalokho, awudingi ukufaka isicwebezelisi se-lip noma izindebe zomlomo, udinga nje ukuthambisa futhi usuvele ungumnikazi wezindebe ezinhle.
Khetha i-lipstick ngokusho kombala wamazinyo
Uma unezinyo elimhlophe, uzoba muhle kakhulu uma ugqoke obomvu, o-orange-red, lotus-pink, orange-pink, njll. Ama-lipstick anemibala enqunu kufanele uwagweme uma ungazifaki izimonyo ngoba azokwenza awukhululekile, isikhumba sakho asibukhali kakhulu.
Uma unamazinyo ashintshile, imibala ye-lipstick elungile yilena: opinki onqunu, opinki onsomi, opinki okhanyayo, obomvu obubandayo, njll. Le mibala izokwenza uqweqwe lwakho lukhanye kakhulu.
Khetha i-lipstick esekelwe embala wezinwele
Uma unezinwele ezimnyama zendabuko, i-lipstick ebomvu izofaneleka kakhulu kumantombazane ase-Asia.
Izinwele eziwolintshi kufanele zikhethe imibala ekhanyayo ye-lipstick. Ukuhlanganiswa kombala wezinwele nombala we-lipstick kuzothuthukisa isitayela sakho, ubuntu kanye nobuhle besitayela.
Izinwele ezi-blonde kufanele zikhethe i-lipstick ewolintshi noma epinki ukuze zithuthukise ubuhle bazo bobusha.
Izinwele ezinsundu kufanele zikhethe i-lipstick ewolintshi, i-earth orange, i-orange pink, i-pink yomhlaba, njll. ukukusiza ukhanyise ubuhle obumnene nobunhle.
Izinwele eziluhlaza zivame ukubonakala emantombazaneni obuntu, ngakho-ke umbala ofanele we-lipstick okufanele ukhethe i-lipstick ebomvu.
Izinwele ze-ombre ezinombala okhanyayo kufanele zikhethe i-lip gloss ngethoni ekhanyayo ukwandisa umbono.
Xem Thêm Cân sức khỏe loại nào tốt? Top 10 cân sức khỏe giá rẻ, chính xác | Muasalebang
Zama i-lipstick ngaphambi kokuthenga
Imvamisa, amantombazane lapho ethenga i-lipstick azozama i-lipstick ngqo ezindebeni zawo noma afake i-lipstick ngemuva kwesandla sabo. Kodwa-ke, ukuze uqinisekise isici senhlanzeko, akufanele uhlole i-lipstick ezindebeni zakho, kodwa uyisebenzise esihlokweni somunwe wakho. Ngenxa yokuthi isikhumba eminweni sincane, sizosiza ukukhombisa nokugqamisa umbala ofanele we-lipstick.
Khetha i-lipstick enkampanini enedumela elihle
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ze-lipstick ezivela kumikhiqizo eminingi ehlukene nemikhiqizo. Ngaphandle kwemikhiqizo enedumela elihle, kukhona nezindebe zomlomo ezingamanga eziningi zemikhiqizo edumile. Lokhu kuzodala ubunzima obuningi kumantombazane amaningi lapho ekhetha i-lipstick. Iningi labo likhetha imibala ye-lipstick ngokuthanda kwabo. Uma uthenga i-lipstick okokuqala ngqa futhi ungazazi izinhlobo eziningi ze-lipstick, ungabhekisa kumikhiqizo efana nale:
Korean lipstick: Innisfree, Laneige, 3CE, Bbia, Espoir, Etude House, Missha, Peri’s Ink,…
Izindebe zomlomo zaseJapan: Shu Uemura, Shiseido, Kose,…
Izindebe zomlomo ezivela emazweni aseYurophu naseMelika: Rouge Hermes, Tom Ford, Maybelline, Lancome, Mac, Estee Lauder, L’Oreal, Bourjois,…
Naka usuku lokuphelelwa yisikhathi
Olunye ulwazi lwe-lipstick okufanele ukunake usuku lokuphelelwa yisikhathi. Ngokuvamile ama-lipstick anombala omuhle kuphela lapho ehlala eshalofini, ngakho-ke lapho uthenga i-lipstick udinga ukunaka lokhu ukuze ukhethe umkhiqizo wakamuva.
Amanothi ambalwa lapho usebenzisa i-Hermes lipstick evamile kahle
Uma ufuna i-Hermes lipstick ibe nombala omuhle ojwayelekile ezindebeni zakho futhi ingafi, lapho uyisebenzisa, udinga ukunaka izinto ezimbalwa kanjena:
Khipha izindebe zakho njalo ukuze uzigcine zithambile futhi zibushelelezi.
Faka izingqimba eziningi ze-lipstick ukusiza ukuthola umbala ofanele.
Vala i-lipstick cap ngokushesha ngemva kokusetshenziswa ukuze ugweme ukuthi i-lipstick ifakwe i-oxidized indawo yangaphandle.
Yenza i-lipstick yakho ihlale isikhathi eside ngokuyigcoba kabili. Uma ugcoba i-lipstick okokuqala ngqa, cindezela izindebe zakho ngesicubu esomile ukuze usize i-lipstick iphele. Bese ufaka ungqimba oluncane lwempushana ezindebeni futhi usebenzise i-lipstick futhi.
Ukuze uthole i-lipstick yombala ehamba phambili, gcoba i-lip balm futhi usebenzise i-concealer. Ukwenza kanjalo kuzolinganisa izindebe futhi uthole umbala ojwayelekile.
Ukuze ugweme izindebe ezimnyama lapho usebenzisa i-lipstick njalo, kufanele ukhumbule ukususa izimonyo kahle ekupheleni kosuku. Unakekela izindebe zakho ngokugcoba amafutha ezindebe ezengeziwe nokusebenzisa imaski yokulala yezindebe zakho. Uma usebenzisa amafutha omlomo phakathi nosuku, khetha i-lipstick ene-SPF ukuvikela izindebe zakho.
Isiphetho: Iyiphi iNdodana kaHermes enhle?
Ngokwabelana ngolwazi konke mayelana nomugqa I-lipstick ye-Hermes Izihloko ezingenhla njengombala ongcono kakhulu we-lipstick, ulwazi lokukhetha i-lipstick elungile namanothi lapho usebenzisa i-lipstick kusize abafundi ukuthi bafunde izinto eziwusizo kakhulu. Lo mugqa we-lipstick udala i-craze yabo bonke abathandi be-lipstick. Uma ungumthandi we-lipstick, akufanele uphuthelwe yilolu hlobo lwezimonyo ezisezingeni eliphezulu. Uma ungazi ukuthi yimuphi umbala we-lipstick ongcono kakhulu, ungabheka imikhiqizo engu-5 ephezulu ngenhla noma ukhethe Umbala we-Hermes lipstick inombolo 85. Entombazaneni enobuntu noma emnene, ifaneleka kakhulu.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-874, ukuvakashelwa okungu-1 namuhla)
Review 7 nồi chiên không dầu Lock&Lock chất lượng | Muasalebang
Top 10 phim Vượt ngục đỉnh nhất mà bạn phải xem | Muasalebang